Maxay Tahay Sababta Xawaareynta Websaydhku Iyo 5 Siyaabood Oo Loo Kordhiyo | Martech Zone
Talaado, Maarso 17, 2020 Khamiis, Maarso 19, 2020 Katherine Horne
Weligaa ma ka quusatay bogga gaabis-rarka ah, adigoo riixaya badhanka dambe si aad u hesho macluumaadka aad raadineysay meel kale? Dabcan, waxaad leedahay; qof kastaa wuxuu leeyahay hal dhibic ama mid kale. Si kastaba ha noqotee, 25% naga mid ah ayaa ka tagi doona bog haddii uusan ku dhejin afar ilbiriqsi (rajooyinkuna waa sii kordhayaan uun kolba waqtiga socdaba).
Laakiin taasi maahan sababta kaliya ee xawaaraha degelku u muhiim yahay. Qiimeynta Google tixgeli waxqabadka boggaaga iyo xawaaraha. Xawaaraha gaabiska ah ayaa dhaawici kara qiimeynta boggaaga xitaa haddii mawduucaagu fiican yahay.
Marka la soo koobo, sida ugu dhakhsaha badan ee culeyska websaydhkaagu u saameyn doono suurtagalnimada in booqdayaashu ka helaan shabakaddaada Mar alla markii ay helaan boggaaga, waxqabadka boggaagu wuxuu saameyn ku yeelanayaa inay sii joogaan oo ay eegaan waxa ku jira. Hadda aan eegno siyaabaha aad u hagaajin karto waxqabadka boggaaga.
1. Adeegso Qalabka Google ee Bogga Gaaban
Google Qalabka bogga waa meel fiican oo laga bilaabi karo markay tahay hagaajinta waxqabadka boggaaga.
Waad ku falanqeyn kartaa boggaaga bogga 'PageSpeed' si aad u hesho dhibco guud, taas oo ah lambar tilmaamaya sida wanaagsan ee Google u maleynayo in bartaada ay wax u qabaneyso - dhibcahaagu wuu sarreeyaa, sida ugu dhaqsaha badan (iyo ka sii fiican) ee websaydhkaagu sameynayo.
2. Kordhi Kheyraadka Websaydhkaaga
Isticmaalka feylasha yar iyo cabirka faylasha ee yar ayaa kaa caawinaya. Waxaa jira dhowr waxyaalood waad sameyn kartaa si aad tan u gaarto:
Sare u qaad sawiradaada: Marka hore, hubi inaad isticmaaleyso nooca qaabka ugufiican sawiradaada (tusaale, Jpgyada sawirada, PNGs naqshadaha). Ku cadaadi sawiradaada, si ku habboon u adeegsiga farsamooyin lumis ah oo yareynaya cabirka faylkaaga adoo ilaalinaya daacadnimada muuqaalka (ugu yaraan isha aadanaha). Hubso in tirada sawirradaadu ay habboon yihiin - dib u cabbir sawirrada si ayan u weynaan.
3. Cache, Cache, Kayd Website-kaaga
Qafaalashooyinku waa qayb weyn oo ka mid ah xawaareynta boggaaga xawaaraha xawaaraha. Waxaa jira laba waxyaalood oo la sameeyo markay tahay kaydinta.
Marka hore, hel oo adeegso CDN ama shabakad gaarsiinta waxyaabaha. CDN-yada ayaa ah shabakadaha shabakadaha kaydiya nuqulada boggaaga. Kadib, marka qof codsado websaydhkaaga, waxaa loo galiyaa iyaga oo isticmaalaya adeegaha iyaga ugu dhow. Tani waxay yareynaysaa masaafada ay baakadaha u leeyihiin inay ku safraan ka hor inta aysan u tagin isticmaalaha.
Marka labaad, ayaa la dhigay ku xajisid madaxyada HTTP Kuwaas oo weheliya faylasha ka yimid shabakadaada shabakada si adeegsadayaasha baarayaashu ay u kaydin karaan qaar (haddii aysan ahayn dhammaantood) boggaaga. In kasta oo tani aysan waxtar weyn u lahayn booqashada ugu horreysa ee isticmaaleyaasha, waxay ku noqon kartaa faa'iido booqashooyinka soo socda marka aysan u baahnayn inay sugaan inta ay websaydhkaagu buuxinayaan
4. Hubso in websaydhkaagu yahay mid saaxiibtinimo leh
Isticmaalayaasha moobiillada waxay u muuqdaan inay ku jiraan shabakado ka gaabiya kuwa ay adeegsadaan kombuyuutarrada iyo kumbuyuutarrada gacanta. Marka waa muhiim in bartaadu si dhakhso leh ugu shuban karto duruufo aan fiicnayn. Noocyada moobiilka ee bogagga waa in loo qaabeeyaa si ay ugu baahan yihiin baaxad ballaadhin yar in dhiggooda shaashadda weyn.
5. Xullo Bixiye Websaydh Wanaagsan
Waad sameyn kartaa wax kasta oo sax ah marka la eego hagaajinta boggaaga, laakiin haddii bixiyahaaga martigelinta ee webka uu u dhaqmo sidii culeys, waxaad wali arki kartaa waqtiyada xawaaraha websaydhka.
Hubso inaad dooratay qorshe martigelin ah oo ku habboon baahiyahaaga. Ikhtiyaariyada ku habboon miisaaniyadda, qiimaha jaban ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo rafcaan leh, laakiin waxay la imaan karaan xaddidaadyo hoos u dhigi kara bartaada (gaar ahaan haddii aad aragto heerar badan oo taraafig ah ama haddii websaydhyadaadu ay yihiin kheyraad culus).
Sidoo kale, hubi in martidaadu tahay adeeg bixiye adag oo adeegyo dhakhso leh. Dhammaan shirkadaha looma abuurin si siman, shirkadaha qaarna waxay macaamiishooda siiyaan adeegyo dhaqso badan, xitaa markay wax walba oo kale u siman yihiin. Way adkaan kartaa in la sheego cidda martida loo yahay, laakiin dib u eegista macaamiisha waxay noqon kartaa mid waxtar leh inta lagu gudajiro nidaamka iibsiga.
Xawaaraha websaydhkaaga, arrimaha ku saabsan helitaanka iyo haysashada martida, markaa waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in boggagaagu ay sida ugu dhakhsaha badan u shuban yihiin. Nasiib wanaagse, hagaajinta waxqabadka websaydhkaagu ma aha wax aad u adag, maqaalkan, waxaan ku soo qaadnay guulo deg deg ah oo kaa caawin doona boggaaga.
Katie Horne waa injineer software iyo qoraa farsamo. Waxay leedahay shahaadooyinka xisaabta iyo dhaqaalaha ee Smith College. Shaqadeedu waxay ku saabsan tahay maaddooyin kala duwan oo laga helo aqoonsiga iyo maaraynta marin u helka websaydhka.
Zenkit: Maamul Howlaha Guud ahaan Kooxaha, Qalabka iyo Shirkadaha